Ny boky "Aperture 3- Lesona Fototra amin'ny teny Espaniôla" dia tonga amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny bilaogy HeylenFoto dia namoaka vaovao mahaliana izay namoahana ny boky iray izay nomanin'izy ireo ho an'ny iPad ary ho azon'ireo mpampiasa te-hanana manomboka mampiasa ny programa Aperture 3.
Mitondra ny lohateny hoe «Aperture 3 - lesona fototra amin'ny teny espaniola»Ary ao anatin'izany ny lesona rehetra navoaka tao amin'ny bilaogy HeylenFoto sy atiny fanampiny izay hanampy bebe kokoa amin'ny fahalalanao ny programa fanovana sary an'i Apple.
Raha te hankafy ny fanontana an'ity boky ity ianao izay natao manokana ho an'ny iPad dia mila manana ianao iBooks 2 napetraka. Misy ihany koa ny kinova PDF izay azonao atao amin'ny computer na amin'ny fitaovana hafa. Ah, adinoko ny zava-dehibe indrindra, Aperture 3- Maimaimpoana ny lesona fototra amin'ny teny espaniola.
Fanazavana fanampiny - iBooks dia havaozina amin'ny kinova 2.1.1
Sintomy - Aperture 3 - Lesona fototra amin'ny teny espaniola: kinova manokana ho an'ny iPad - kinova PDF
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny boky "Aperture 3 - Lesona fototra amin'ny teny espaniola" dia tonga amin'ny iPad
Tutorial: jailbreak tsy mandeha amin'ny iOS 5.1.1 miaraka amin'ny Absinthe 2.0.2